Vibration Dampers Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Vibration Dampers Factory
Ama-vibration dampers asetshenziselwa ukuncibilikisa ukudlidlizela kwe-aeolian komqhubi wezintambo zokudlulisa, kanye nocingo lomhlabathi, i-OPGW, ne-ADSS. Ukudlidliza okubangelwa umoya kwabaqhubi bezindiza kuvamile emhlabeni jikelele futhi kungadala ukukhathala komqhubi eduze kokunamathiselwe kwehadiwe. Izokwehlisa impilo yesevisi yezintambo ze-ADSS noma ze-OPGW.
Ama-vibration dampers asetshenziswa kabanzi ukulawula ukudlidliza kwe-aeolian kwekhebula le-ADSS nezintambo zomhlaba kufaka phakathi izintambo zomhlaba ezi-optical (OPGW). Lapho i-damper ibekwa kumqhubi odlidlizelayo, ukuhamba kwezisindo kuzokhiqiza ukugoba kwentambo yensimbi. Ukugoba kwentambo kudala ukuthi izintambo ngazinye zomucu zihlangane, ngaleyo ndlela kuphele amandla.
Kunezinhlobo ezimbili zohlobo lokudlidliza olujwayelekile ebangeni lomkhiqizo wejera
1) Spamp vibration damper
2) Isidambisi sokudlidliza seStockbridge
I-Spiral Vibration Dampers yenziwa ngepulasitiki engazweli esimweni sezulu, engonakalisi, ama-dampers anengxenye enkulu, eyenziwe nge-damping damping esayizi ikhebula, Futhi isitampu sokudlidliza se-stockbridge senziwe ngensimbi engenasici, i-aluminium, ne-hardware yensimbi. Uhlobo lwe-vibration damper luzokhethwa ngokuya ngesiphathi esithile nezidingo zomqhubi.
Umugqa weJera unikezela wonke amalunga wekhebula nezinye izinsimbi ezisetshenziswa ngesikhathi sokwakhiwa kwenethiwekhi ye-FTTX, njengabakaki be-pole, izintambo zensimbi engagqwali, izingwegwe, amaketanga, ukugcinwa kwekhebula okunethezeka njll.
Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ukuthola eminye imininingwane mayelana nalezi zidambisi zokudlidliza.